Ungazoyisa njani iingxaki emsebenzini - Amadoda aQinisekileyo
Iingxaki emsebenzini zinokunxulunyaniswa neemeko zongquzulwano. Ngamaxesha okanye ubunzima ekufuneka ujongane nabo emsebenzini, okanye mhlawumbi iyafana nokungoneliseki. Kwenzeka ntoni xa singawuthandi umsebenzi wethu? Kungenxa yokuba uza kuhamba nomzuzu wexesha lokuncipha.
Zininzi izinto ezinokubangela le meko. Njani Elona nyathelo lilungileyo akusoloko kukubaleka ingxaki kodwa ukwazi indlela yokujongana nayo. Ukuthetha ngokwaneleyo lelinye lawona manyathelo mabalaseleyo, kuba injongo kukuphucula impilo yethu yasemzimbeni nasengqondweni, kodwa iya kuza ngokusibhatalela.
1 Zeziphi iingxabano ezenziwa ziingxaki emsebenzini?
2 Yintoni ekufuneka sisebenzele kuyo ukoyisa iingxaki emsebenzini
Zeziphi iingxabano ezenziwa ziingxaki emsebenzini?
Ukungabikho kovelwano nabanye: umntu ngamnye ulawula kwaye aziphathe ngeempawu zakhe. Kwizihlandlo ezininzi sinokufumana abantu esisebenza nabo abangahambelaniyo nobuntu bethu kwaye kulapho enye yeengxabano zethu iqala khona. Kufuneka sive uvelwano kwabanye, kufuneka sihloniphe ubuntu bomntu ngamnye kwaye singaziva sityeshelweNgale ndlela asizenzi imeko ezingonwabisiyo.
Ukungabikho konxibelelwano noontanga. Enye yeempazamo ezenziwa rhoqo kwaye ezingasenzi ukuba sicinge ngale ngxaki yabasebenzi. Emsebenzini kuya kufuneka nisebenze njengeqela, ukuba kufuneka unxibelelane ngento akufuneki uyithathe njengento engenamsebenzi ukuze omnye umntu asebenze naye ayenze. Intsebenziswano ibalulekile kwaye ukubona ukuba uyinxalenye yeli phulo kwenza ukuba linyathelo licace.
Uxinzelelo lomsebenzi: Lelinye lamanqaku apho sifike njengesona sizathu siphambili. Zininzi izalathiso ezinokusenza sizive kakubi. Uxinzelelo lomsebenzi emsebenzini ogqithileyo ivela kumaxesha abekiweyo, okanye mhlawumbi ngu sizithwalise uxanduva oluninzi kakhulu esingenako ukusilawula ngoxolo lwengqondo. Olu hlobo loxinzelelo luyayanyaniswa Ukudinwa komzimba.
Ukudinwa kwesifo: Yinto ebizwa ngokuba sisifo sokudinwa ngokwasemzimbeni nangokweemvakalelo okubangelwa luxinzelelo lomsebenzi. Iimpawu zayo zinokufunyanwa kukugcwala ngokweemvakalelo, uxinzelelo emsebenzini kunye nemfuno enkulu, echitha amandla ethu ngokugqithileyo.
Ukuhlukunyezwa emsebenzini. Le nto inokuphuhliswa njengesizathu sokungabikho kovelwano kwabanye. Ngokuqinisekileyo olu hlobo lokuhlukumeza luvela koogxa bakho okanye kumagosa akho aphezulu, kubangela imeko-bume engazinzanga. Kulapho uqala khona ukuqonda ukuba ihlazo, amarhe okanye izoyikiso ziyavela, ukunciphisa ukuzithemba kwakho kunye nokungakuvumeli ukuba usebenze ngendlela eqhelekileyo.
Yintoni ekufuneka sisebenzele kuyo ukoyisa iingxaki emsebenzini
Kubalulekile ukuhlalutya iziphumo ezibangele le mpixano yeemvakalelo ukuba ivele. Uninzi lweengqondo lucebisa ukuvula iimvakalelo zakho kunye nemvakalelo yovelwano kwabanye. Mhlawumbi ingxaki amaxesha amaninzi ayisosiphumo sabanye, kodwa iyapheliswa ngaphakathi kuwe. Kungenxa yoko le nto kufuneka sigxile kwezi ntlobo zemicimbi. Nangona kunjalo, sinokukunika iingcebiso ezincinci ezinokukunceda:
Ukwamkelwa kwengxaki. Ngokuqinisekileyo yonke into iqala ngengxaki yomsebenzi encinci eya kuthi inyuke ngokuhamba kwexesha. Okwangoku kufuneka uhambe okomzuzwana igama "ndinyanisile" kwaye uzibeke kumbono womnye umntu. Lixesha lokuba uzame ukuqonda imeko leyo kwaye ufumane isisombululo.
Uvelwano: eli nqaku lihamba kunye nokwamkelwa kwengxaki. Ukusombulula lo mbuzo mhlawumbi yeyona ndlela ingcono yokwenza Ndiziva ndizivalelene nabanye abafundi. Njengoko siqwalasele ngokutsha, kubalulekile ukuba sihlalutye ungquzulwano kwaye sivavanye ukuba ngubani ovelise loo meko.
Unxibelelwano lubalulekile: sidinga unxibelelwano ngaphandle kokuwela kwiingxoxo. Kuya kufuneka uvavanye iiprojekthi zakho kwaye uxoxe ngeenguqu ezinokwenzeka, kodwa uzenze ngendlela enobutshaba. Akufuneki sidale ukungathembani kwaye ngenxa yoko sinokusombulula nayiphi na ingxaki ngokuqheleka okupheleleyo. Kubalulekile ukuba uvuleleke kwingxoxo kwaye uvakalise iimvakalelo zakho, ngendlela efanayo zama ukwamkela uvelwano lokuzimisela ukucela uxolelo xa lufuneka.
Oko kuqinisekisa akusileli. Kufuneka siwazi amalungelo ethu kwaye sazi nendlela yokuwakhusela. Kufuneka sazi ukuba sithi nini "hayi" kodwa ngaphandle kokulimaza iimvakalelo zabanye. Ukuba ngale ndlela sinyanisekile kwaye banokwazi ukuqaphela, iba yiyo kwisakhono esingasikhokeleli kwiingxabano ezingakumbi.
Yenza isimo sengqondo sokungahambi: Kuya kufuneka ukuba ufike kweli nqanaba ukuba ungquzulwano luyaqhubeka. Uzamile ngoxolo ukusombulula ingxaki kwaye emva kwethutyana kuyabuya kwakhona. Ukuba ufikelele kwincoko yababini kwaye uzibeke ezihlangwini zabo, olona khetho lusempilweni kwintlalo-ntle yakho kukudala isimo sengqondo sokungahambi kakuhle kule ngxaki. Yindlela yokusebenza kwiimvakalelo zakho, kuba zizihlandlo zomsindo omkhulu kunye nokudakumba. Ukwenza kunye nokukhuthaza olu hlobo lwesicwangciso kukho iindlela zokuphumla, kuba oku unokufunda iingcebiso zokuphumla okanye imbonakalo yoyilo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Ungazoyisa njani iingxaki emsebenzini